Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 49
Azafady azafady ny famaritana ny tsy fahafatesana sy ny fanjakana amin'ny fomba fohy hoe ahoana no ahafahana tsy mety maty?
Ny tsy fahafatesana dia ny fanjakana izay mahatsapa ny maha-izy azy amin'ny alàlan'ny fanjakana sy ny toe-javatra ary ny fanovana rehetra.
Ny tsy fisiana dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fomba mazava, amin'ny fampiasana ny faharanitan-tsaina. Ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia tsy afaka ny ho tonga amin'ny finoana jamba amin'ny karazana fiainana mandrakizay aorian'ny fahafatesana, ary tsy misy olona afaka miditra ao amin'ny toetry ny tsy fahafatesana, amin'ny fanomezana, ny fankasitrahana, ny lova. Tsy maintsy mendrika asa mafy ny tsy fahafatesana, amin'ny intelligence.
Ny tsy fahafatesan'ny olona dia tsy maintsy mahazo izany ary mahazo alohan'ny fahafatesana, mandritra ny androm-piainan'ny vatana amin'ny vatan'ity tontolo ity. Aorian'ny fahafatesana tsy mety maty ny tsy fahafatesana. Miezaka ny ho tsy mety maty avokoa ny saina voaentana rehetra. Raha tsy maty ny tsy fahafatesana, alohan'ny hahafatesany dia maty ny vatana ary ny saina dia hiverina amin'ny tany amin'ny vatana vaovao, fotoana fohy ary mandra-pahatongan'ny tsy fahafatesana.
Ny lalana mankany amin'ny tsy fahafatesana dia ny tsy hitsahatra hanondro ny tenany amin'ny vatany, na amin'ny faniriany sy ny fihetseham-pony, ny toetrany. Tokony hamantatra ny tenany amin 'izay manana ny fahaizana fahalalana izy; izany hoe miaraka amin'ny tenany. Rehefa mieritreritra an'izany izy ary mamaritra ny momba azy, dia toa akaiky ny tsy fahafatesana. Mba hahombiazan'ity, dia tsy maintsy mametraka ny lisitry ny ampahany sy ny singa izay mamaritra ny zavatra efa hitany hatramin'izay. Aorian'io firaketana io dia tsy maintsy mandinika ny zavatra azo ovaina izy, ary inona no maharitra. Izay mitoetra ao aminy, ary tsy miala amin'ny fotoana sy ny toerana, dia azy; ny hafa rehetra dia mandalo.
Ho hita fa ny vola, ny tany, ny antikristy, ny fananana, ny toerana, ny laza ary ny zavatra hafa amin'ity karazan'izao tontolo izao ity dia am-piheverana, ary anisan'ny zavatra tsy misy vidiny, ary ny kely na tsy manan-danja amin'ny olona iray miezaka ny ho lasa tsy mety maty. Ny zavatra sarobidy dia tsy azo tsapain-tanana, fa tsy amin'ny fahatsapana.
Right motive ary marina Ny eritreritra eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny dingana rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro, na inona na inona hodiavin'ny fiainana, dia ireo zavatra izay manisa. Tsy ny fiainana tsotra no mitondra vokatra haingana indrindra. Ny fiainan'ny mpanelanelana, lavitra ny fiahiana sy fakam-panahy, dia tsy manome ny fitaovana na ny fepetra. Ny olona iray izay manana olana, fitsapana, fakam-panahy, fa mandresy azy ireo ary mijanona ho mifehy azy ireo ary marina amin'ny tanjon'izany fikasana hanjary tsy mety maty izany, dia ho tonga amin'ny tanjony ny fiainany.
Ny toe-tsaina ao an-tsaina izay tena ilaina dia ny hahafantaran'ilay mpikaroka fa misaraka amin'ny vatany izy, misaraka amin'ny toetrany, ny faniriany, ny fihetseham-pony, ny fihetseham-pony ary ny fahafinaretany sy ny fijaliany. Tokony ho fantany fa misaraka izy ary mahaleotena izany rehetra izany, na dia toa manohina ny tenany aza izy io ary indraindray dia toa ny tenany ihany. Ny toe-tsainy dia tokony ho tsy manan-tsahala, miaina toy ny tsy manam-petra, mandrakizay, tsy misy fetra sy fizaran-taona, na fandinihana ny toerana. Izany no toetry ny tsy fahafatesana. Tsy maintsy mazoto mijery azy io ho toy ny tena izy. Avy eo dia afaka mahafantatra izy. Ny mozika dia tsy ampy, ary hamboraka izany, tsy misy ilàna sy tsy manan-danja.
Moa ve ny olona tiany sy tsy tiany ny fisaintsainan'ny tenany? Raha eny, ahoana no ahafantaran'izy ireo azy? Raha tsy izany, avy amin'ireto no tiany sy tsy tiany
Ny teny hoe "fanahin'ny olona" dia ampiasaina am-pihambahambana ary manondro andalana maro amin'ireo faritra tsy hita maso izay antsoina hoe lehilahy. Ny fanahy dia midika hoe ny toetrany taloha, na ny aloky ny aloky ny fahafatesana aorian'ny fahafatesana, na ny fitsipika manjaka tsy an-kijanona izay ao aminy mandritra ny fiainana. Ny fanahin'olombelona dia heverina ho toy ny eritreritra-ny fitsipika fisainana, ny fahazavana misaina ao amin'ny vatana. Ny fitiavana sy ny tsy fitiavanan'ny olombelona dia tsy misaina ny sainy. Ny fitiavana sy ny tsy fitiavana dia vokatry ny asan'ny saina amin'ny faniriana.
Rehefa mieritreritra ny sasany amin'ireo faniriana tiany izy ireo; Ny faniriana hafa tsy tian'ny saina. Ny toetran'ny saina izay mieritreritra ny faniriana, ny faniriana tia; fa ny toetry ny saina izay mihevi-tena amin'ny faniriana sy ny fisainana, dia tsy tiany ny faniriana. Amin'izany fomba izany dia manjary tiany sy tsy tiany ny saina sy ny faniriana. Ny tiany sy ny tsy tiany dia avy amin'ny fitoviana sy ny tsy fahampian'ny saina sy faniriana. Ny fitiavan-dehilahy sy ny tsy fitiavan-dralehilahy dia teraka sy nentina tao aminy. Avy eo dia maneho ny tiany sy tsy tiany ny momba azy. Ny tiana sy ny tsy tiany noforonina ao amin'ny olona iray dia hamorona tiana sy tsy tiany amin'ny lehilahy izay mihaona aminy; ary ireo izay miteraka olon-kafa dia tia sy tsy tiany amin'ny lehilahy hafa izay nanaparitaka ny tiany sy tsy tiany; mba ho feno fitiavana sy tsy tian'ny tontolo izao tontolo izao. Amin'izany fomba izany dia azo lazaina fa izao tontolo izao dia taratry ny olona tiany sy tsy tiany.
Tianao ve izao tontolo izao sy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao? Sa tsy sitrak'izy ireo? Tsy zava-poana ny miezaka ny miala amin'ny fitiavany na ny tsy tia azy. Tsara ho an'ny olombelona ny mandà ny hanasazy amin'ny sainy izay fantany fa tsy mety. Noho izany dia manoratra ho tsy tia mozika izy. Ny tsara indrindra ho an'ny olona dia tiany sy eritreretina momba izay fantany fa marina, ary manao izany. Amin'izany fomba izany no itiavan'izy ireo ny hasiny sy ny heriny. Raha mitahiry ny tiany sy tsy tiany amin'ny tenany izy, ny hafa kosa dia hanao izany koa, ary hiova amin'ny tontolo sy ny tsy tiany ny tontolo.